Blue Ventures on Jan 12, 2022
Featured Antom-pivelomana maharitra ny ranomasina noho ny fambolen’ny fokonolona ahi-dranomasina
Mirotsaka amin’ny fambolena an-drano ireo mponina ao Belo sur Mer – indrindra ireo vehivavy. Tsy nanana ho avy aho talohan’ny nambolena ahi-dranomasina. Nandao ny tanàna ireo zanako lahy ary tsy nanana antom-pivelomana aho satria efa osa ka tsy afaka manjono....
Blue Ventures / Jan 12, 2022
Don’t MissFanavaozana ny varotraLMMA
Ny volana Jona, nankany Manjaboake ny ekipa mpanara-maso ny tontolo iainana ao an-toerana mba hampita traikefa amin’ireo mpianany voalohany. Indray maraina mamiratry ny volana Jona, nakarinay tanaty sambo ny fitaovanay, tany Andavadaoka any atsimo-andrefan’i Madagasikara. Tao ny fitaovana entina miditra...
Don’t MissFanavaozana ny varotraMadagascar
Tamin’ny taona 2018, nanatontosa voalohany ny fanakatonana vonjimaika ny fanjonoana orita ny fokonolona tao amin'ny Nosy Barren. Ankehitriny izy ireo dia mitarika ireo tetikasam-pitantanana maharitra ny jono ao an-toerana.
Jean Berthieu Nomenjanahary / Jan 12, 2022
Fanavaozana ny varotraMadagascarMahajamba
Ho an’ireo fokonolona any amin’ireo tanànan’ny mpanjono mipetraka lavitra any amin’ny faritra avaratra-andrefan’i Madagasikara, ny fanamasahana trondro amin’ny setroka dia vadin’asa izay ahafahana mitahiry ny trondro sy manena ny fahaverezan’ny vokatra
Joelson Anjaranirina Rakotoson / Jan 12, 2022